Izindaba - Ijeli lokuhlanza izandla elwa namagciwane
Ijeli elwa namagciwane eliwashwa ngesandla libulala ijwabu elilahlayo, okuwumkhiqizo omusha wokubulala amagciwane owenziwe yinkampani yethu ngonyaka we-2020. Ingabulala amagciwane kanye namagciwane ezandleni. Kuyinto ijeli elwa namagciwane elinemvelo, elingacasuli isikhumba somuntu futhi elinobungane kakhulu nemvelo. Njengamanje, ithunyelwe emazweni amaningi afana neJapan neHong Kong. Sinamasethi amaningi wemishini yokugcwalisa uketshezi okuzenzakalelayo ngokugcwele. Imikhiqizo yethu ikhiqizwa kwi-workshop yokuhlanzwa, enobungani bemvelo nenhlanzeko, futhi ingathuthukisa ukusebenza kahle kokukhiqiza. Ingakwazi ukuhlangabezana ngokugcwele nezidingo zamakhasimende. Ngemuva kokuthi umkhiqizo usuqediwe, sizophinde sihlele umhloli wekhwalithi ukwenza ukuhlolwa kwesibili ukugwema noma yiziphi izinkinga zekhwalithi, futhi ungathenga futhi usebenzise ngokuzethemba. Ukupakisha nezinto zokusetshenziswa zemikhiqizo yethu kuhambisana namazinga omhlaba, futhi sineziqu eziphelele zokungenisa nokuthekelisa kanye nemibiko yokuhlola.
Ngaphezu kwalokho, sinezinhlobo ezahlukahlukene zama-antibacterial agents:Insipho yesandla elwa namagciwaneDis Ukudla okubandayo kweCold Chain Emiphongolweni 、Ijeli yesanithayiza yesandla、 Hand Sanitizer With Alcohol ukuze ukhethe.
Isetshenziswa kanjani: Cindezela inani elifanele le-gel, ulisebenzise ngokulinganayo ezandleni zakho, bese uxolela imizuzwana embalwa kuze kube yilapho indawo ihlanzekile.